बुधबार, मंसिर २२, २०७८ १२:०९:३४
स्वस्थ जीवन शैलीको अबलम्बन गरौँ, आयुर्वेदको उचित प्रयोग गरौँ, जडिबुटीको सदुपयोग गरौँ, स्वस्थ रहौं, दीर्घजीवी बनौं, जय आयुर्वेद, जय धन्वन्तरि ।
बिहीबार, कात्तिक १८, २०७८ कखरा संवाददाता
डिल्ली रमण सुवेदी
हरेक व्यक्ति स्वस्थ, समृद्ध र सुखी रहन चाहन्छ । रोग लागोस्, दुःख पाइयोस्, गरिब भइयोस् भन्ने कसैको पनि चाहना हुँदैन । तर त्यसका लागि आधार निर्माण गरेका छौं त ? यो गम्भीर प्रश्न हो । स्वस्थ, सुखी र समृद्ध बन्न हाम्रो पूर्व तयारी के छ ? यसतर्फ हाम्रो ध्यान गएको पाइदैन । अर्थात् हामी आधार नै निर्माण नगरि राम्रो स्वास्थ्य, सुख र समृद्धिको कामना गर्दछौं । जसले हामीलाई अझ दुःखी र पीडित बनाइरहेको छ । जीवनको सबैभन्दा ठूलो धन भनेको स्वास्थ्य हो । स्वास्थ्य ठीक छ भने सबैकुरा ठिक हुँदै आउँछ । भनिन्छ ‘स्वस्थ मान्छेले नै स्वस्थ सिर्जना गर्न सक्छ’ । स्वस्थ सिर्जना नै सुख र समृद्धिको आधार हो । त्यसैले स्वस्थ रहनु सबैभन्दा पहिले आवश्यक छ ।
तत्काल स्वस्थ रहन वा दीर्घायु प्राप्त गर्न वा स्वस्थ जीवन जिउन केही आधार तयार गर्नु पर्दछ । बिहानीले दिनको लक्षण दिन्छ भनेझैं हामी जीवनभर स्वस्थ रहन सुरुवात देखि तयारी गर्नुपर्दछ । सुरुदेखि नै स्वस्थ जीवनशैली अपनाउन जरुरी छ । स्वस्थ जीवनका लागि संयमित जीवन शैली, उचित आहार–विहार, योगासन, ध्यान र प्राणायम यी पाँच आधारलाई अबलम्बन गर्नु पर्दछ ।
क) संयमित जीवन शैली
गलत वा खराब जीवन शैलीका कारण नै हामी रोगी, दुःखी र गरिब भइरहेका छौं । तनाव, रिस, राग, द्वैषयुक्त व्यवहार खराब जीवनशैलीका घोतक हुन् । त्यसैले संयमित बन्ने, असल व्यवहार गर्ने, रिस, राग, द्वैषबाट टाढै रहने नै संयमित जीवन शैली हो । यसले नै मानिसलाई स्वस्थ बनाउँछ ।
ख) उचित आहार–विहार
गरिब मुलुकका आम नागरिकको समस्या भनेको खानपानमा अनियमितता हो । समाज, संस्कार र व्यवहारले पनि हामीलाई अनियमित खानपान गराउँछ । गरिब हुनुको कारणले पनि भेटेको बेला पाएजति खाने र नभेटेको बेला भोकै बस्ने बाध्यता छ । यस्तो खानपानले पनि हामीलाई अस्वस्थ बनाइ रहेको छ । त्यसैले खानपान वा आहार–विहारलाई व्यवस्थित गर्नुपर्दछ । जसका लागि उचित समयमा खाने, ठिक्क मात्रामा खाने, आफ्नो शरीरलाई चाहिने र धान्ने मात्रामा मात्रै खाने गर्दा शरीर स्वस्थ बन्दछ । यसैगरि स्वच्छ हावा भएको, शान्त र सुन्दर ठाउँमा घुम्न वा विहार गर्न पनि आवश्यक छ ।
योगासनलाई शारीरिक व्यायाम पनि भनिन्छ । विभिन्न आसन मार्फत शरीरका अंगहरुलाई उर्जाशील र क्रियाशील बनाउन आवश्यक छ । योगले शारीरिक, मानसिक रुपमा स्वस्थ रहन मद्दत पुर्याउँछ भने नसर्ने रोगहरुबाट बचाउँछ । यसले स्वस्थकर दीर्घ जीवन प्रदानगर्ने वैज्ञानिक आधारहरु भएकोले नियमित योग अभ्यास गर्नु आवश्यक छ ।
ध्यान भनेको शान्त वा विचार शुन्य भएर बस्ने वा कुनै एक विषयमा केन्द्रित भएर बस्ने भनेर बुझिन्छ । यसले शारीरिक तथा मानसिक थकान, तनाव तथा डिप्रेशन कम गर्न सहयोग गर्छ । यसैगरि अनिद्रा हटाउने, मानसिक एकाग्रता कायम गरि दिमाग तीक्ष्ण बनाउने, सकारात्मक सोचको विकास गराउने गर्दछ । त्यसैले हामीले हरेक दिन, हरेक समय वा हरेक ठाउँमा ध्यान गर्न सक्छौं ।
प्राणायम भनेको स्वास प्रश्वाससँग सम्बन्धित अभ्यासहरु हुन् । श्वासप्रश्वासको समस्याबाट नै धेरै रोगहरु लाग्ने भएकोले प्राणायमको माध्यमबाट रोक्न वा निर्मूल गर्न सकिन्छ । प्राणायमका विभिन्न प्रकार छन् ती प्रकारहरु विज्ञ वा जानकारबाट ग्रहण गरि हामीले अवलम्बन गर्नुपर्दछ । यसले मानसिक रुपमा स्थिरता कायम गर्ने, रक्त सञ्चार वा पाचन प्रणालीलाई सशक्त बनाउने, शारीरिक तौल घटाउने तथा मानसिक तनाव घटाउने र हामीलाई स्वस्थ बनाउने काम गर्दछ ।
यी पाँच आधारहरु व्यक्ति स्वयम्ले निःशुल्क वा न्यून शुल्कमा अवलम्बन गर्न सक्दछ । त्यसैले स्वस्थ रहने उपाय आफैसँग छ भन्ने कुरालाई मनन् गरि प्रत्येक व्यक्तिले संयमित जीवनशैली, उचित आहार–विहार, योगासन, ध्यान, प्राणायम आदिको अवलम्बन गर्नुपर्दछ । सामान्य स्वास्थ्यका नियमहरुलाई व्यवहारमा उतार्न सके स्वास्थ्यको प्रवर्द्धन तथा पुनःस्थापनामा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने देखिन्छ । स्वस्थ जीवनशैलीको माध्यमबाट आरोग्य, आत्मविश्वास र वौद्धिक मनोबल वृद्धि गर्न सकिन्छ ।
आयुर्वेद र स्वस्थ जीवन
आयुर्वेद नेपालको मौलिक चिकित्सा पद्धति हो । जीवन शैलीको उचित व्यवस्थापन र जडिबुटीको उचित प्रयोगबाट नै हाम्रो स्वास्थ्य रक्षा गर्ने कार्य आयुर्वेद विज्ञानले गर्दै आएको छ । आयुर्वेद विज्ञानका प्रवर्तक धन्वन्तरिले पनि स्वस्थ जीवनशैली र जडिबुटीको योग गराएका थिए । त्यसैले उनलाई आयुर्वेद विज्ञानका प्रवर्तक, गुरु वा देवताको रुपमा पूजिदै आएको छ ।
वर्तमान अवस्थामा बढ्दै गइरहेको अस्वस्थ्य जीवन शैलीसँग सम्बन्धित नसर्ने प्रकृतिका रोगहरुको रोकथामका लागि यो विधाको अहम् भूमिका रहिआएको छ । स्वस्थ नागरिक, स्वस्थ समाज, स्वस्थ जीवन, स्वस्थ उत्पादन र स्वस्थ उपभोगको अवधारणालाई दैनिक जीवनमा कार्यान्वयन गर्नु जरुरी छ । प्रकृति मैत्री स्वच्छ जीवन प्रणाली प्रवर्द्धनका साथै प्रतिरोधात्मक विधि अवलम्बन गरि रोग प्रतिरोधी क्षमता वृद्धि गर्न सकेमा विभिन्न समय क्रममा देखापर्ने महामारीजन्य रोगलाई निर्मुल पार्न सकिने चिकित्सकहरुको भनाई छ ।
आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभाग
निरोगी नेपाल निर्माण सरकारको मूल स्वास्थ्य नीति हो । आयुर्वेद जस्तो मौलिक चिकित्साविधिको स्वतःस्फूर्त प्रयोगको माध्यमबाट असल राष्ट्रिय भावनालाई दिगो रुपमा जागृत गराई स्वास्थ्यको माध्यमबाट समग्र राष्ट्र निर्माणमा टेवा पुर्याउन सकिने उद्देश्यका साथ नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभाग पनि क्रियाशील छ ।
स्वस्थ जीवन शैली, दिन चर्या, ऋतु चर्या, स्वस्थ एवम् सन्तुलित आहार, योग, ध्यान, स्थानीय स्तरमा उपलब्ध हुने बहुउपयोगी जडिबुटीहरु र तिनको सदुपयोग आदिको जानकारी प्रत्येक नागरिकलाई पुर्याउन विभाग सक्रिय छ । यही उद्देश्यले विभागले संघीय सशर्त अनुदानबाट प्रदेश र स्थानीय तह मार्फत देशैभरि नागरिक आरोग्य कार्यक्रम, विद्यालय आयुर्वेद तथा योग शिक्षा कार्यक्रम, स्वस्थ जीवन कार्यक्रम, जेष्ठ नागरिकका लागि स्वास्थ्य प्रवद्र्धन कार्यक्रम, मातृ–शिशु सुरक्षार्थ औषधि वितरण, नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्र स्थापना लगायत विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । यी कार्यक्रमहरुसँग जोडिएर पनि हामीले लाभलिन सक्छौं । राज्यले नागरिकको स्वास्थ्य रक्षाका लागि गरेको लगानीको प्रतिफल लिनु हामी सबैको अधिकार पनि हो । त्यसैले स्वस्थ जीवन शैलीको अबलम्बन गरौँ, आयुर्वेदको उचित प्रयोग गरौँ, जडिबुटीको सदुपयोग गरौँ, स्वस्थ रहौं, दीर्घजीवी बनौं, जय आयुर्वेद, जय धन्वन्तरि ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, कात्तिक १८, २०७८, १६:३१:००
कविताः अफगानी नानीहरुको प्रश्न बिहीबार, मंसिर ९, २०७८
जीवनको उपलब्धिः ‘स्वस्थ र सन्तुष्ट’ बुधबार, मंसिर ८, २०७८
मौलिकता अपहरणमा परेको अलिनो तिहार शनिबार, कात्तिक २७, २०७८
फुल्न नपाएका फुलहरु बुधबार, कात्तिक २४, २०७८